Xukuumada Soomaaliya oo Sheegtay in Ninkii is Qarxiyay uu ka Tirsanaa Ciidamada Nabad Sugida iyo Nabad Sugida oo ka Jawaabtay
Wasiirka warfaafinta xukuumada Federaalka Soomaaliya C/llaahi Ciilmooge Xirsi oo warbaahinta la hadllay ayaa sheegay in qaraxii saakay ka dhacay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya uu ahaa mid fashilmay.
Wasiirrka ayaa sheegay in qof is qarxiyay sida uu hadalka u dhigay uu ka tirsanaa raggii horay uga soo goostay xoogagga Al-Shabaab, markii danbana ka mid noqday ciidamada nabad-sugida dowladda Soomaaliya, laakiin ma uusan bixin faah faahin intaa ka badan.
Wasiirku ma uusan sheegin shaqsiga is qarxiyay magaciisa, laakiin waxaa uu sheegay in ay faah faahin intaa ka badan ka sugayaan laamaha amniga dowladda Soomaaliya, gaar ahaan hay’adda nabad-sugida.
Qofkaan ayaa la sheegay in uu saakay isku dayay in uu gudaha u galo xafiiska ra’iisal wasaaraha xukuumada Soomaaliya, islamarkaana ah goobta uu ra’iisal wasaaraha ku nool yahay ee guriga u ah, laakiin waxaa la sheegay in ay ka soo celiyeen ilaalada guriga ra’iisal wasaaraha.
Taliyaha ciidanka nabad-sugidda gobolka Banaadir Khaliif Axmed Ereg ayaa shir jaraa’id uga jawaabay hadalka wasiirka, wuxuuna beeniyay in qofka ismiidaamiyay uu ka mid noqday ciidanka nabad-sugidda.
Ereg ayaa shirkiisa jaraa’id wuxuu ku soo bandhigay sawir uu sheegay in uu yahay ninka is qarxiyay, oo magaciisa uu ku sheegay Cali Cabdi Xareed Maalin.
Ereg ayaa ku waafaqay wasiirka in qofka ismiidaamiyay uu horey uga tirsanaan jiray kooxda Al-Shabaab, balse wuxuu diiday inuu ka mid noqday ciidanka nabad-sugidda.
Dowladda Soomaaliya ayaa marar badan waxaa lagu eedeeyay in ay si aan ka fiirsi laheyn markiiba ciidamo ugu qorato dhalinyarrada ka soo goosata kooxda Al-Shabaab ee isku soo dhiibta dowladda Soomaaliya.
« War deg deg ah: Al-Shabaab oo sheegtay masuuliyada weerarkii ismiidaaminta ee ka dhacay Madaxtooyada Soomaaliya
Sirdoonka AMISOM oo shaaca ka qaaday in Alshabaab ay u kala firxadeen Somaliland iyo Puntland »